मन्त्री ज्यू विचल्ली छ त विकास बजेटको « News24 : Premium News Channel
मन्त्री ज्यू विचल्ली छ त विकास बजेटको
एमाले नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटको चर्चा यतिबेला सदनदेखि सडकसम्म छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेटको चर्चा, समर्थन र विरोध यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ । तर, यतिबेला मैले अर्थमन्त्री पौडेलेले ल्याएको बजेट कस्तो छ र यसले कति प्रतिफल देला यो त अर्को बर्षसम्म हुने कार्यान्वयनले देखाउँला तर देशको विकास बजेटको चाहिँ विचल्ली छ मन्त्री ज्यू भनेर देशको विकासको तस्वीर देखाउँन खाजेको हुँ ।
यो बिषय तपाई र तपाई जस्ता जानकार सबै अधिकारीहरुलाई छ तर पनि किन पुजीगत खर्च भनेर छुट्टाइएको विकास बजेट खर्च हुँदैन भन्ने चाहि जनताको प्रश्न हो यति बेला । तपाईहरु तलव भक्ता खाने, सबै सेवा सुविधा लिने तर देशको विकास चाहि नगर्ने यो प्रवृत्ति विस्तारै मौलाउँदै गएको छ । किन साधारण तर्फको सबै खर्च हुन्छ तर पुजीगत खर्च सधै कमी हुन्छ ? कहिल्यै पुजीगत खर्च नगरे वापत कुनै मन्त्री वा कर्मचारीलाई सजाय भएको छ ? यो प्रश्न हरेक मन्त्री र कर्मचारीलाई जान्छ तर चित्त बुझ्दो जवाफ कस्ले दिन सक्छ ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो यो देशको ।
सरकारको नीति कार्यक्रम बजेट हेर्दा निक्कै राम्रो लाग्छ र कुनै पनि नीति हेर्दा नराम्रो छैन तर पनि मेरो देशको विकास चाहि किन हुँन सक्दैन र भइरहेको छैन यो सबै नेपालीको साझा प्रश्न हो । यसअघिको सरकारले पनि भूकम्पपछिको राहत, पुनस्र्थापना र पुर्ननिर्माण प्रमुख प्राथमिकता दिदै आर्थिक बर्ष २०७२।७३ का लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएको थियो । तर, यो बजेटको साधारण खर्च करिव सकिएको छ तर पुजीगत खर्च २ खर्ब ८ अर्ब छुट्टाएको मध्ये खर्च २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यतिबेला अर्थमन्त्री रामशरण महतले बजेट कार्यान्वयनको बर्ष भनेर घोषणा गरे तर यसैबर्ष सबैभन्दा कम विकास बजेट खर्च भएको छ । सधै विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिकै रुपमा विकास हुँदा देशको समृद्धि ओझेलमा पर्दै गएको छ । र, खर्च नहुनका केही कारण यस्ता छन् ।
(शुक्रबार संसदमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल)
-कारण नम्बर एक : भूकम्पको कारण कर्मचारी खटिए, विकास निर्माण हुन सकेन
बैशाख १२ गतेको बिनाशकारी भूकम्पका कारण आर्थिक बर्ष ७१।७२ को बजेट खर्च हुन सकेन । आर्थिक बर्षको अन्त्यको बेलमा भूकम्प गएपछि सरकारी कर्मचारीहरु उद्धार, राहतका लागि खटिए जस्को कारण बजेट खर्च गर्न सकिएन भने विकास निर्माणको काम अलपत्र भयो । त्यसपछि शुरु आएको नयाँ बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारी कर्मचारीहरु तातेनन् । कर्मचारीहरु अल्पकालीन पुर्नस्थापना र दीर्घकालीन पुर्नस्थापनको काममा खटिएका कारण विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
-कारण नम्बर दुई : भारतीय नाकाबन्दी र इन्धन अभाव
यसबर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी पनि हो । भारतले असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि शुरु गरेको चार महिना लामो अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धनको अभाव भयो । जस्को कारण ठूला आयोजनाहरुलाई चाहिने इन्धन आपूर्ति हुन सकेन भने मानिसहरुलाई नै हिड्न समेत समस्या भयो र यसको प्रभाव पनि विकास बजेटमा देखियो ।
-कारण नम्बर तीन : मधेस आन्दोलन
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको तराई मधेस बन्दको कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखियो । आर्थिक बर्षको शुरुवातदेखि पाँच महिना लामो आन्दोलनका कारणका कारण आपूर्ति व्यवस्थासँगै समग्र बजेटमा प्रभाव परेको हो ।
माथि उल्लेखित यी त यस बर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण हो तर यस बर्ष मात्रै होइन नेपालमा हरेक आर्थिक बर्षमा विकास बजेट खर्च भएको छैन र भएपनि आर्थिक बर्षको अन्तिममा मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ । बर्षैपच्छिे यस्तो नियती दोहोरिनुको केही कारण यस्ता छन् ।
-कारण नम्बर चार : आयोजनाको वित्तिय सभ्भाव्यताकै बारेमा अध्ययन हुँदैन
कुनैपनि आयोजना शुरु गर्दा ती आयोजनाहरुको बारे विस्तृत वित्तिय सभ्भाव्यताको अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ तर नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, नेता, कर्मचारीहरुले समेत वित्तिय सभ्भाव्यताको अध्ययन नै नगरि त्यस्ता आयोजनाहरुलाई बजेट दिने गर्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन सक्दैन ।
-कारण नम्बर पाँच : ठेक्का पट्टा समयमा हुँदैन
अर्थमन्त्रालयले रकम छुट्ट्याएर आयोजनाहरुलाई दिए पनि समयैमा ठेक्कापट्टा हुन नसक्दा पनि रकम खर्च भएको छैन । आर्थिक बर्षको शुरुवातमै ठेक्का पट्टा नहुदा विकास बजेट सधै प्रभावित भइरहेको छ ।
-कारण नम्बर छ : ठेक्का दिए अनुसार काम हुँदैन
ठेक्का पट्टा भएका आयोजनाहरुमा समेत ठेक्का दिइदा गरिएको सम्झौता अनुुसार काम हुँदैन । समय हुँदा चुप लागेर बस्ने तर आर्थिक बर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा गर्ने र गुणस्तरहिन काम गर्दा समेत विकास बजेटको बिचल्ली हुने गरेको छ ।
-कारण नम्बर सात : काम गर्ने क्षमता नै छैन ।
विकास बजेट खर्च नहुनुको अर्को प्रमुख कारण काम गर्ने क्षमता कमजोर हुनु हो । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरुको जुन क्षमता छ त्यो देशको विकासका लागि अपुग छ । जति स्रोत र साधानहरु छन् तिनीहरुले मात्रै विकासको काम गर्न सक्दैनन् जस्को कारण बर्षिने विकास बजेट खर्च हुन सकेको देखिदैन ।
यही कारण देश निरन्तर ओरालो लाग्दैछ । जति हामी समृद्धि तर्फ उफ्रन खोज्छौं हामीलाई रोक्ने तत्व त्यति नै क्रियाशिल छ । सबै जसो सरकारले देशलाई समृद्धिकै दिशातर्फ लैजान खोजिरहेका छन् तर कुनै पनि बजेटले समृद्धि दिन सकेको छैन । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटले पनि समृद्धिको ढोका खोल्ने विश्वास धेरैले गरेका छन् तर जवसम्म पुजीगत खर्चको विकास गर्ने र ठूला आयोजनाहरु बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान जाँदैन तवसम्म समृद्धिको हाम्रो प्यास मेटिने छैन बरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु निरन्तर आइ नै रहनेछन् ।